Original နဲ့ Copy ခွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » Original နဲ့ Copy ခွေ
Original နဲ့ Copy ခွေ
Posted by မမလေး on Sep 15, 2010 in Myanma News |7comments
ခုတလော ခိုးကူးခွေ မြန်မာခွေတွေ မရောင်းရတော့ဘူး . . .ဘယ်ဆိုင်မှာမှ မရှိတော့ဘူး ။ ၀ယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တောင်မှ မြန်မာသီချင်းခွေတစ်ချပ်ကို ၅၀၀ ကျပ်လောက်ရှိတယ် ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ခွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကပြောပြပါတယ် ။ DVD ခွေတွေတောင် တစ်ချပ် ၄၀၀ နဲ့ ၃ ချပ် ၁၀၀၀ ဖြစ်နေပါပြီ ။ စမ်းချောင်းက ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတော့ ၄ ခွေ ၁၀၀၀ ပဲရှိပါတယ်တဲ့ . . .
Original က ၁၉၀၀ လောက်ရှိတာ Copy ခွေ ၂၅၀ က လူတန်းစားအားလုံးက၀ယ်ကြည့်နေနိုင်ပါတယ် ။ တူတူပဲဆိုတော့ Original ခွေတွေဘယ်သူမှ ၀ယ်မကြည့်ကြပါဘူုး ။ ခု Copy ခွေမရောင်းရပေမယ့် Original ခွေတွေသိပ်အရောင်းအသွက်ပါဘူးတဲ့ . . .
မြန်မာခွေတွေဝယ်မရဘူးဆိုတာ ထင်လို့ပါ ။ သိုသိုသိပ်သိပ်ရောင်းနေပါသေးတယ် ။
ကော်ပီခွေဈေးနဲ့ မူရင်းခွေဈေးနုန်း အများကြီးဟနေသေးရင်ကော်ပီခွေက ထွက်နေအုံးမှာပါ။
လုံးဝတင်းကျပ်လိုက်လို ကော်ပီမထွက်ရ ဘူးဆိုရင် ခွေဝယ်ကြည့်တဲ့သူက သိပ်ကောင်းမှဝယ်မှာပါ။
ဒီတော့ အဆိုတော်အသစ်ကလေးတွေ ဂွမ်းဘို့ပြင်ထားပါ။
မူရင်းတစ်ချပ်ကို သူငယ်ချင်းလေးယောက် တစ်ယောက် ငါးရာစုပြီးဝယ်လိုက်ပါတယ်။
ပထမတစ်ခေါက် ကို တစ်ယောက်အပိုင်ယူ။
အားလုံးကြိုက်တဲ့အဆိုတော်မှ ၀ယ်မယ် ထွက်တိုင်းမ၀ယ်ဘူး။
ထုတ်လုပ်သူများ စဥ်းစားရမှာ က အရေအတွက်အပေါ်မှာမျှော်ပြီးစားမလား။
တကယ်ကို မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိရင်။
တေးရေး တေးဆို တီးဝိုင်း ထုတ်လုပ်သူ အခလို ငွေအပြတ်မယူနဲ့။
ဆရာကြီးပလေးဘွိုင်သန်းနိုင် ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်လို့ပြောဘူးတာကို ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ကြစေလိုပါတယ်။
ဒီပြဿနာက တော်တော်စဉ်းစားရ ခက်တယ်။ ကျနော့် အမြင်ကတော့
ထုတ်လုပ်သူတွေလဲ သူ့ လုပ်အားစိုက်ထုတ်မှု ရှိပါတယ်။ အခွန်အခတွေလဲ ပေးဆောင်ထားကြတယ်။
ကူပီကူးရတာ အရမ်းလွယ်ကူနေတော့ ခိုးကူးခွေထွတ်ဖို့က အရမ်းလွယ်နေပြန်ရော။
ခိုးကူးခွေကိစ္စကို တင်းကျပ်စွာ ကိုင်ပြီဆိုပါစို့……
မူရင်းထုတ်လုပ်သူတွေ တန်းတူ အခွင့်အရေးနဲ့ ထုတ်လုပ်ကြပြီဆိုပါစို့
သူ့ ဈေးကွက်နဲ့ သူရပ်တည်သွားမှာပါ။
အရေအသွေးနဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ မ မျှရင် သူပဲ ထမင်း ငတ်မှာပါ။
၀ယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအား စုံမှတ်တစ်ခု မှာ ဈေးတန်းလေးတစ်ခု ပေါ်ထွတ်လာမှာပါ။
နီးစပ်သူအချင်းချင်း လေးငါးယောက်ပေါင်းဝယ်မယ် ခွေပွားယူကြမယ် ဒါမျိုးလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။..
ကျနော်သာဆိုရင် ကျနော်တကယ်ကြိုက်တဲ့ ခွေ အပိုင် ဘဲ သိမ်းထားမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
သိတော့ပါဘူး။ သူတို့ ဘာလုပ်လုပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး။ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ သီချင်းပဲနားထောင်တယ်။ သီချင်းကလည်း online မှာရှာတာများတယ်။ မရှိရင် social site တွေမှာတောင်းတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ သွားယူတယ်။ ဒါအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်လုံးဝ ကော်ပီခွေ မ၀ယ်ဘူး။ အော်ရဂျင်နယ် လည်းဝယ်ဘူး။ :D
အစစ်လည်း မ၀ယ်ဘူး အတုလည်း မ၀ယ်ဘူး… အွန်လိုင်းကနေ ရှာလိုက်တယ် တခါတလေ နားထောင်တယ်
သူတို.တွေက ခိုးကူးကြောင်. စီးပွားပျက်တယ် ပြောနေတာပါ၊ တကယ်ကို သူများမူရင်း အင်္ဂလိပ်၊တရုတ်၊ကိုရီးယား၊ ဂျပန် သီချင်းတွေ ကော်ပီလုပ်တာ အနုပညာကြေး ပေးလို. လား။
မေသန်းနုရဲ့ ပါရမီရှင် ထွက်ပြီး ၂ ရက်ပဲရှိသေးတယ် . ခွေဆိုင်မှာ အဲ့ခွေရောင်းတောင်ရောင်းနေပြီ ။